Mac -ka 2022 wuxuu ku dari karaa jajabyada mustaqbalka ee 3nm | Waxaan ka imid mac
2022 Macs ayaa ku dari kara Mustaqbalka 3nm Chips
In kasta oo hadda ay aad u yar tahay soo -saarista chip, haddana soo -saarayaashu ma joojiyaan baaritaanka si jiilalka mustaqbalka ee aaladuhu u fiicnaadaan oo u daboolaan baahida shirkadaha. Lahaanshaha jajabyada horumarsan ayaa ka dhigaya aaladaha iyaga ku dara si fiican. TSMC waxay rajaynaysaa wax soo saarka ballaaran ee 2022 chips -ka cusub ee 3 nm ee Mac -yada isla sanadkaas ay ku dari lahaayeen.
TSMC waxay ku socotaa wadadii ay ugu dari lahayd tikniyoolajigeeda 3nm chip wax soo saarka mugga qeybtii labaad ee 2022 -ka Mac. Markaa ugu yaraan ka hadal warbixinnada cusub ee ay soo saareen ilaha warshadaha silikon. Shirkadda ayaa laga yaabaa inay awood u yeelato inay soo saarto noocyadan cusub ee chip-ka badhtamaha 2022-ka, sidaa darteed waxay u badan tahay in Apple u adeegsan karto Mac-yadeeda cusub dhammaadka sannadkaas.
Ka hadlida jajabyadan cusub ee 3nm waa horumar la taaban karo. Waxaan ka hadleynaa inaan awood u yeelan karno inaan kor u qaadno awoodda iyo waxqabadka 11% halka kuleylka la dhimi doono ilaa 27% taasna waxay ka dhigan tahay xitaa wax qabad badan marka loo eego shuruudaha caalamiga ah. Tirooyin aad u fiican taas oo saadaalineysa in Mac -yada sannadka soo socda ay mar kale noqon doonaan mashiinnadii lagu garaaci lahaa tartanka.
Waxaas oo dhan waxaa dheer, warbixinnadu waxay kaloo ka hadlaan awoodda soo -saaraha aaladahaan, inay awoodaan inay ku hormaraan teknolojiyadda iyo waxyar si ay u hagaajiyaan jajabyadaas si, ugu dambayn sanadka 2026 waxaan arki karnaa 1 nm chips. Tani waxay u taagnaan doontaa horumar aan caadi ahayn oo ballaadhan marka la barbar dhigo hadda 5 nm. Taasi waa sababta aysan caqli gal ahayn in loo maleeyo in marka la gaaro 2027 Apple Macs ay noqon doonaan kombiyuutarro aad u awood badan xitaa heerkooda ugu hooseeya.
Hadda, sida xanta oo dhan, waa inaan sugnaa si aan u aragno inay rumowdo iyo in kale, maxaa yeelay waxaa sidoo kale la sheegay in kuwa cusub ee 3nm chips ah marka hore lagu dari doono iPad Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » 2022 Macs ayaa ku dari kara Mustaqbalka 3nm Chips
Waxay la mid tahay 17, mashiinkii ugu horreeyay ee macOS Monterey dalwaddii oo ku shaqeeya Apple Silicon